Dagalada deegaanka canfarta ee soo noqnoqda - ዜና ከምንጩ
Waxa ay hore uu sheegeen madax ka tirsan degaanka canfarta in bishii hamle ee 2013kii malmihii ugu danbeeyay deegaankaasi gobolka loogu yeedho 4 meesha uu dhaw ee miyiga gaalikooma goob cafimaad weraar loo gaystay oo hub culus loo adeegsada,y in ay jiraan muwadiniin badan oo halkaasi ka barokacday oo mood iyo dhaawacba la soo gaadhsiiyay. Xiligaasina waxa madaxa xafiiska is gaadhsiinta ee degaanku Axmed Alooyta uu sheegay in barokacayaasha ay soo werareen kooxda argagaxisada lagu magacabay ee tplf.
Waxa uu Axmad Alooyta uu sheegay oo kale in kooxda tplf weraradii ay ku soo qaadeen dhinaca fanti resu ay sababeen in dad ka badan 30 kun oo qof ay ka soo barokaceen yaloona goolina oo ay guryahoodi iyo hantidoodiba ka soo carareen oo ay ku jiraan xeryo.markii ay dawlada itoobiya samaysay xabad joojinta ee ay ka soo baxeen degaanka tigraay ciidanku bishii sane ee sanadkii 2013kii dhamaadkeedi kadib waxa ay kooxda tplf weerar ku soo qaadeen degaanada amxarada iyo canfarta. Xiligaasi in kasta oo ay kooxdu isku dayeen in degaanka canfarta ay uga gudbaan degaanka amxarada madama ay uu ogolaan wayeen shacabka iyo dawlada canfartu, ayaa waxa uu yidhi masuulkaasi waxa ay weerar ku soo qaadeen dad barokacayaal ah oo 200 ka badan. Waxana la ogsoon yahay in werarkaasina ay ku wax yeloobeen caruur yar yar iyo haween.waxana uu wargayska addis maleda uu xiligaasi ka soo waramay war ku saabsan in ha’ayada unicef ay dhaliishay dhacdada sababtay dhimashada daka rayidka ah ee ka badan 200 ee weerarka ay kooxda tplf ku soo qaaday.
Axmad Nuur oo ah habeeyaha bayaanka xalada dagdaga ah ee degaankasi ayaa wargayska uu sheegay in xiligii ay kooxda tplf gaalikooma ku sameeyen dilkii foosha xuma dadka rayidka ahaa kadib ay hadana degaanka canfarta is ku dayeen meelo kala duwan in ka badan todoba weerar in ay ku soo qaadaan, waana ay ku guul daraysteen.sida uu is ku habeeyaha guud uu sheegay waxa weerarkii ugu horeyay ay kooxda tplf degaanka kaga soo qaadeen dhinacayo kala duwan, waxana ay kooxdu shegeen buu yidhi in aanay wax colaadi ka dhaxaynin kooxdaasi iyo shacabka canfarta oo ay yihiin shacabka tigraay iyo canfartu dad isku mid ah, balse ay colaadi ka dhaxayso dawlada iyo shacabka amxarada oo ay raban in ay uu ogolaadan in ay halkaasi uga gudabbn degaanka amxaarada, dawlada degaanka iyo shacabka canfartu waxa ay dhinacoodana uu sheegeen in kooxda rabta in itoobiya ay la dagalanto wado uu furaynin. Waxana ay kooxdu ku soo qadeen werar waxana ay qabsadeen uwaan iyo awraan. Xoolo dhaqatada canfarta iyo booliska gaarkuna waxa ay isticmaaleen ubkii ay haysteen ayaga oo aan wax cawimo ah ka helin dawlada, waxa ay halkii ay ka yimadeen dib ugu celiyeen koxdii tplf. Waxana ay bilaabeen aar goosi kooxdaasi sida uu sheegay iskuhabeyahaasi guud oo waxa ay bilaabeen in ay dadkii soo barokacay ee ku sugnaa xerada gaalikooma ee raydka ahaa ee canfarta ahaa in si bilaa naxariis ah ay uu laayaan.
Waxa kale oo ay kooxdu bilaabeen bu yidhi in gobolka 4 iyo agagaarkaasi uwa iyo jifra ay werar ku soo qaadaan. Waxaana ay shacabka canfartu ay bilaabeen in ay iska difacaan kooxdaasi oo waxa ay la galeen dagaalo culus, waxana ay kala waregeen kaareyaal iyo hub kala duwan. Waxaana shacabka canfartu ay xooga saareen melahaasi kadibna kooxda tplf waxa ay badaleen jahadi ay marka hore ku socdeen. Markii sadexaad waxa ay werareen dhinaca baraxle ayaga oo marmarsiiyo ka dhiganaya muranki iyo suaalihi ka dhaxeeyay ee dhulka ku saabsana, waxaana ay caruur iyo dhalinyaro badan ku garaceen madfac, shacabkii ku noola baraxlayna waxa ay dhinacoioda kula dagalameen hubkii ay haysteen ayaga oo aan dawlada ka sugin ogolaansho oo waxa ay ku dhameyeen kooxdaasi, waxana ay kala wareegeen hub badan, qalabka is gaadhsiinta, karoyaal iyo qaar ka mid ah kooxdaasi iwl. Waxana ay dib uga qabsadeen meelihi ay hore kooxdaasi uga qabsadeen, waxa kale oo uu masuulkaasi sheegay in ay askar badan oo kooxdaasi ka tirsanna qabqabteen.
Shacabkii baraxlay ayaa meelo badan oo ay haysteen si guul leh ugla wareegay. Waxaana ay awoodeen in ay meelihi kala wareegaan oo ay meelahoodina ugu galaan. Waxaana uu si faahfaahsan ku sheegay sida ay ula dagalameen shacabka canfartu ayna uu ogolaan wayeen in ay qabsadaan meelo badan. Waxa kale oo kooxda tplf ay isku dayeen in ay dib uu qabsadan magalada yar ee miyiga ee waarle oo ay dhinac kale ka soo galeen, balse madaama ay shacabkii halkaasi dagana awoodoodi oo dhan is kaga celiyeen waxa ay dib ugu celiyeen halkii ay ka yimadeen. Waxa kale oo uu yidhi is ku habeeyahaasi bayaanka xalada dagdaga ah ee degaankasi waxa kooxdasi ku dhacday niyad jab waxana jidhkooda ka muuqatay gaajo iyo silic .
Waxa kale oo uu hadalkiisa raaciyay Axmad Nuur kooxahaha raba had iyo jeer in ay burburiyaan itoobiya aanay jiri doonin fursad ay wadahadal kula yeelan karaan shacabka canfarta, waxa goa’aan ay ku gaadheen in ilaa kama danbaysta ay la dagalamaan kooxda tplf. Sidaas darteed ilaa inta la tirtirayo kooxda tplf gabi ahaan in aanay shacabka cnfatu joojinayn dagalada ay kula jiraan. Goa’anka shacabkuna in aanu ahayn mid laga noqonayo waxa markhaati uu ah guusha ay sida ku celceliskja ah ugaga guulaysteen meelo badan.
Waxa kale oo uu yidhi kooxda tplf in kasta oo marar badan ay hadana isku dayan in meelo kale ay ka soo galaan dhinaca yaalo shacabkii ayaa inta ay is kaashadeen weraradii ay soo qaadeen iska difaacay oo dhabarka ka jabiyay kooxdaasi, waxa ay hadana markii shanaad isku dayeen in ay dhinaca jifra iyo hamaan ka soo galaan oo ay damceen in ay xidhaan wadada isku xidha itoobiya iyo jabuuti, dhacdadaasina way uu suurtoobi wayday. Markii ay uu suurtoobi wayday in ay dhinac kasta jifra liaa zoon 5 wadada ka jirta in ay ka soo galaan waxa ay is ku dayeen in dhinaca baati ay ka soo galaan.
Tplf laga bilaabo bishii tiqimt 2014kii 15 cisho oo isku xiga waxa ay dagaalo ku soo qaadi jireen sagaalka saac oo habeenimo laga bilaabo ilaa labada saac ee subaxnimo oo meelo kala duwan oo muhiim ah oo canfarta ka mid ah ay isku dayeen in ay qabsadaan, balse cududa shacabka oo midaysan awgaeed way ka fashilantay arintaasi. waxa uu xusay Axmad Nuur in buurta qubaco ay baati uu dhawdahay oo ay kooxdaasina halkaasi ka dhaqdhaqaaqdo xiligan, balse dhinaca canfarta ay wado kasta ka xidhantahay. Kooxdaasi werarka soo qadayna qorshahoodi wuu uu suurtoobi wayay.
In kasta oo hadana ay kooxdaasi bishan hidhaar 6deedi iyo 7deedi 2014ka isku dayeen in ay dhinaca mili weeraro ka soo qaadaan way uu suurtoobi wayday, ayada oo arintu ay sidaasi tahay ayaa kooda tplf waxa ay yidhaahdaan hadana wadada asbaaltiga madaw ah ee itiyo-jabuuti si aan uu gooyno halkaasi waan qabsanay waana war been ah. Kooxdaasi argagaxisada ah meelaha deeganka canfarta ah ee sida dhumaalaysiga ah ay ku soo galeen waxa ka soo gaadhay khasaare badan oo dad iyo duunyoba ah ay ku wayeen. Waxa kale oo uu yidhi in kasta oo ayaga oo kolba soo noqnoqonaya oo hadana ka baxaya halkaasi ay damceen in ay weraaro soo qaadaan waxa si wada jir ah iskaga difaacay ciidanka qaran iyo shacabka canfarta, boliiska gaarka iyo maleeshiyada waxaana laga saaray khadka. Waxaana uu sheegay in khasaaree badan la soo gaadhsiiyay kooxdaasi, in kasta oo Getaajew Redha iyo Dhebresiyoon ay ayaga oo dad badan hogaaminayan ay shan melood oo dagaladu ka socdeen sida jifra, awa, kaasa, eeta iyo meelo kaleba ay ka sheegeen in ay dagaal ku guulaysteen hadana waxa kooxdaasi ay ku guul daraysteen isku daygoodi.
Waxa kale oo uu wargaysku waraystay madaxa koomandh bostiga mile Cabdu Xasan waxaana uu sheegay in wararka ay kooxdaasi ku sheegayaan in ay mile gacanta ku dhigeen ayaa ah been ann geed loogu soo gabado lahayn, sida oo kale shacabkii halkaasi daganaa waxa ay hawl maalmeedkoodi sidii caadiga ahayd uu wataan. Ciidanka qarankuna asaga oo kaashanaya shacabka iyo maleeshiyada canfarta waxa uu marar badan kaga guulaystay dagalada, wararka ay sheegayaan kooxdaasi oo dhamina waa been xaqiiqada ka fog.
Waxa kale oo uu Axmad Nuur uu xiligii uu wargayska uu waramayay sheegay in canfartu si ay itoobiya cadawga uga ilaaliyaan ay naftooda iyo hantidoodaba uu hureen. Waxa kale oo uu dawlada iyo muwaadiniin kastaba ka codsaday in arintaasi ay fahmaan oo looga baahanyahay in taageero kasta oo looga baahanyahyba kula garab istagaan. Canfartu waxa ay cadawga ka ilaalinayaan mahaa deegaankooda oo kaliya ee waxa ay uu dagalamayaan dalka oo dhan. Hantiilayaasha iyo cid kasta oo ku hawlan hawlaha samo falka ah waa in shacabkan ay cawiiyaan. Si gaar ahna waa in ay ku cawiyaan canfarta iyo itoobiyaba gaadiid, cunto, iyo qalabyo kala duwan.
Shacabka canfarta ee xoolo dhaqatada ah xiligii dagaladu ay soocdeen waxa ay kooxda tplftu ay ka layeen xoolo badan oo isugu jiray lo’o, geel, riyo iyo ido waxaana ay kala kulmeen dhibaatooyin faro badan iyo cunto yari. Madaama ay shacabka la soo daristay xaalad cunto yari ah dawlada iyo muwadiniintaba waxa looga baahan yahay in ay garab iyo gashaanba uu noqdaan shacabkaasi. Waxa uu wargayska uu sheegay oo kale madama ay gaajadu aanay wakhti siinayn dadka waa in cid kasta oo itoobiyaan ahi ay uu soo gurmadaan shacabkaasi.
Waxa la ogsoonyahay in kooxda tplf ay marar badan weraro ku soo qadeen canfarta. Hase ahaate weraradaasi lagu soo qaaday inta ay iska difaaceen waxa ay geesinimadooda ku qoreen taariikhda. Waxaana asaas uu ah sirtaasi sadex shay, sida uu Axmad Nuur ku sheegay hadalkiisa arinka kawaad waa shacabka canfarta oo ah xoolo dhaqato oo duurka iyo geedaha dhaxdoodu ku nool sidii guryahooda oo kale maalin kasta, sidaasi darteedna gacmahooda lagama waayo hub ay isku ilaaliyaan. Arinta labaadna waxa weyaan shacabka canfarta oo ah shacab dalkiisa jecel oo mar kasta ilaaliya jiritaankiisa sida itoobiyaanka kalena ah shacab aan loo heli Karin cid uu dhiganta. Qodobka sadexaadna waxa weeyaan shacabka canfarta oo ah shacab maqla hogamiyahooda beeleed.
Shacabka canfartu waxa ay leeyihiin hogaamiyayaal adag, hogaamiyahoodaasina way uu hogaansamaan. Waxa aanay si fiican uu ogsoonyihiin xuquuqdooda iyo xuquuqda cid kasta, sidaas darteed canfartu waxa ay ogsoonyihiin sida ay itoobiya cadawga uga ilaalin la hayeen. Waxaana uu yidhi muwaadiniinta kalena waa inay is kaashadaan oo kooxda argagaxisada ah ee tplf ay si kama danbays ah u ba’abiyaan oo ay uu wada jeestaan dhinaca horumarka. Waxa uu hadalkiisa uu ku soo gabagabeeyay Axmad waa in cid kasta ay ogaato in ay ka goa’antahay shacabka canfarta oo la kaashanaya itoobiyaanka kale in ay dalkooda ka ilaaliyaan cadawga.
Total views : 7512551